आइसियु नपाएर बुहारीको नि,धन भएपछि नारायणकाजीले आक्रोश पोख्दै भने, जनता ‘मारेर कसरी बस्‍न सकेको नालायक सरकार ? – Life Nepali
आइसियु नपाएर बुहारीको नि,धन भएपछि नारायणकाजीले आक्रोश पोख्दै भने, जनता ‘मारेर कसरी बस्‍न सकेको नालायक सरकार ?
काठमाडौं- आइसियु नपाएर बुहारीको दुखद निधन भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारसँग आक्रोशित बनेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सरकारले गैरजिम्‍मेवार र नालायकीपन देखाएको महामारीको बेलामा गर्न सक्‍ने काम पनि नगरेको भन्‍दै अब सबैजनाले आ(आफ्नो तर्फबाट कोभिडविरुद्धको लडाइँमा पहल गर्नु पर्ने बताएका हुन ।
उनले भनेका छन्, ‘ आइसियू र भेम्टिलेटरको कुरा छाडौं, अक्सिजन नपाएर कोभिड बिरामी हेर्दा हेर्दै म रिरहेका छन् ।उपचारमा खटिएका चिकित्सक एवं नर्सहरु त्यो दृश्य टुलुटुलु हेर्नु परेको छ ।’तेस्तै , थाहा नगरपालिका अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालुङ र स्वास्थ्य चौकी बज्रवाराहीमा कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पोजेटिभ देखिए स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई औषधि लेखेर केही निर्देशन सहित घर पठाउँछ ।
स्वास्थ्य केन्द्र बाहिर तयारी अवस्थामा रहेको एम्बुलेन्सले बिरामीलाई घरमा लगेर छोडिदिन्छ ।
नगरपालिकामा यही वैशाख १० गतेदेखि हालसम्म १६३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा सबैलाई घरमै बस्न भनिएको छ । डाक्टरले उनीहरु सबैलाई ‘प्रेस्कृप्सन’मा ‘होम आइसोलेट’ लेखिदिएको सङ्क्रमितले बताएका छन् । ती सङ्क्रमित मध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको, आठ जना निको भएको, छ जनालाई थप उपचारको लागि हेटौँडा पठाएको र बाँकी सबै घर आइसोलेशनमा रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरजकुमार भुजेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको सामुदायिक आइसोलेशनमा भने एक जनालाई पनि पठाइएको छैन ।गत वर्षदेखि क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको थाहा–६ स्थित सामुदायिक भवनमा नगरपालिकाले आइसोलेशन कक्ष स्थापना गरेको छ । बीस श्ययाको उक्त आइसोलेशन तयार भइसकेको र सङ्क्रमितको उपचारको लागि विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य टोली पनि तयार रहेको नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक मेघराज बलामीले जानकारी दिनुभयो ।
नगरको १, २, ३, ४ र ६ वडामा सङ्क्रमित रहेको र उनीहरु घर आइसोलेसनमा बस्दा समुदायमा जोखिम बढ्न सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । डाक्टरले बिरामीको अवस्थाको आधारमा घर आइसोलेशनमा बस्न सिफारिस गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार रहे–नरहेकोबारे एकीन हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
सामान्य तथा कोरानाका बिरामीहरुलाई घरमा पठाउनु अहिलेको बाध्यता रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशन समिति थाहा नगरका सदस्य सुरेन्द्रमान प्रधानले बताउनुभयो । “नगरपालिकाले तयार पारेको आइसोलशनमा जम्मा २० श्ययाको क्षमता छ, नगरमा डेढ सय बिरामी नाघिसक्यो, कसलाई छानेर सामुदायिक आइसोलेशनमा पठाउनु?’ उहाँले भन्नुभयो ।
नगरमा अहिले कोरोनाको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो समस्या देखिएमा मात्र परीक्षण गर्ने गरिएको छ । सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई पाँच दिनपछि ज्वरो आएमा परीक्षण गर्ने गरिएको छ । “व्यक्तिहरु स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्दा यो अवस्था छ भने स्वास्थ्य केन्द्र समुदायमा पुगेर परीक्षण गर्ने हो भने अवस्था भयावह देखिन सक्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
आवश्यक उपकरणको अभावमा समुदायस्तरमा कोरोनाको परीक्षण गर्न नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरेर अर्को आइसोलेशन कक्ष स्थापनाको तयारी गरिरहेको नगरप्रमुख लवशेर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
Previous घरमा बस्दाबस्दै अक्सिजनको मात्रा घट्न थाले कोभिडका बिरामीले के गर्ने?
Next महेश बस्नेतले महन्थ पक्षधर सांसदलाई भक्तपुरको रिसोर्टमा पुर्याएको खुलासा